သွားလေရာတိုင်းမှာ သားဖြစ်သူ ရေမွန့်ကြောင့် မျက်နှာ ပွင့်ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မိခင် ခင်မြတ်မွန် – Update News
သွားလေရာတိုင်းမှာ သားဖြစ်သူ ရေမွန့်ကြောင့် မျက်နှာ ပွင့်ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မိခင် ခင်မြတ်မွန်
အဆိုတော် ခင်မြတ်မွန်ကတော့ သူမရဲ့ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးခဲ့တဲ့ သားဖြစ်သူရေမွန်ကို ဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက် တော်တော်ကြီးကို စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲနေရတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာအရာမှာလည်း လက်စောင်းထက်သလို စိတ်ထားလေးလည်းနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ ရေမွန်ဟာ လူသေသွားပေမယ့် နာမည်မသေပဲကျန်နေရစ်ပြီး မိသားစုဟာလည်း သူ့ကြောင့် အားလုံးရဲ့မေတ္တာကို ခံစားစံစားနေရကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူ ခင်မြတ်မွန်ဟာ အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“မနေ့ကပိုပိုးလေးခွေးကိုက်ခံရလို့ (ခလေးနဲ့ခွေးဆော့ကြရင်းမတော်တဆ ခြစ်မိသွားတာပါ)။ ဆေးရုံမှာ ကာကွယ်ဆေးသွားထိုးတော့ ဂိတ်ဝဝင်ဝင်ချင်း တာဝန်ကျဝန်ထမ်းလေးက အန်တီက ကိုရေမွန့်အမေလားမေးပြီး အစစအဆင်ပြေအော င်လိုက်ကူညီပေးတာ။
ပိုက်ဆံလဲတပြားမှမကုန်၊ဆရာဝန်မ‌လေးတွေလဲဂရုစိုက်၊ သဘောကောင်းကြလို့ ကျေးဇူးပါ။ Online ကနေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေမှာတယ်။ deli လာပို့လို့ငွေရှင်းမယ်လုပ်တော့ လက်ဆောင်ပါ ငွေပေးဖို့မလိုပါဘူးတဲ့။ တွတ်ပီကားကိစ္စနဲ့ Myanmar Plaza ရောက်ရင်း ဟိုဒီလျှောက်ကြည့်
အိပ်ယာခင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကာလာဒီဇိုင်းလေးတွေ့လို့ဈေးမေးပြီးဆစ်တော့ ဆိုင်ရှင်ညီမက ဈေးလျှော့ပေးပါ့မယ်၊ လျှော့တာမှ တစ်ပြားမှမယူဘဲ လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်တဲ့ (ချစ်ကြပေသရှင်..ပြည်တစ်ခွင်ပေါ့😁)”တွေဟာ..တွတ်ပီကို အားလုံးချစ်ခင်လေးစားခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြယုဂ်တွေပါပဲ။
တွတ်ပီကိုငယ်စဉ်ကတည်းက လူတိုင်း(စိမ်းသူကျက်သူမရွေး)အပေါ်ရိုးသားဖို့၊ ကူညီဖို့၊ မဟုတ်မတရားတာဆိုခေါင်းငုံ့မခံဖို့ အမြဲသွန်သင်ခဲ့တယ်။ အရွယ်ရောက်လာတော့ ကိုယ်သွန်သင်ခဲ့တာထက်သူက ပိုဖြူစင်ရိုးသားသူ၊ ကူညီအားပေးတတ်သူ၊ မဟုတ်ရင်မခံတတ်သူဖြစ်လာတယ်။
တစ်ခါတစ်လေတော့ လူအ(Idiots)ပီပီ သူ့နောက်ကျောဓါးနဲ့ထိုးမှန်း သိသိကြီးနဲ့ခွင့်လွှတ်ခဲ့တဲ့ Case တွေလဲအများကြီး 😅 ဒါတွေကြောင့်. .သူသေဆုံးသွားချိန်မှာသူ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြ၊ နှမြောကြ၊ လွမ်းဆွတ်ကြ၊ လှူဒါန်းကြလဲဆိုတာ..အံ့ဩခြင်းကြီးစွာနဲ့သိခဲ့ရတယ်.”
“သူ့စိတ်ထားကောင်းမှုလေးရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ကျန်ရစ်သူမိသားစု ခုချိန်ထိ ခံစားစံစားနေ ရတယ်.(ဒီစာ‌ရေးရင်း ကိုယ်သာ တွတ်ပီအမေမဟုတ်ဘဲ (ဂီတလောကထဲက)ဟို ပြည်သူ့မေတ္တာတုံး ချဉ်ဖတ်ကောင်အမေသာဖြစ်ကြည့် သွားလေရာကလော်တုတ်၊ အဆဲခံရမှာတောထဲ‌ ခေါင်းမဖေါ်ဝံ့မှာ အသေအချာဘဲလို့ 😁 တွေးရင်းပြုံးမိသေးတယ်) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တွတ်ပီဟာမေတ္တာပေးခဲ့လို့ သူတင်မက သူ့မိသားစုပါ အားလုံးရဲ့မေတ္တာ ပြန်ရခဲ့တာပါ
(ဒီကမ္ဘာမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဟာ မေတ္တာမဟုတ်ဘူးလား..? 🎶 ) ဘာရန်ကြွင်းရန်စမှမရှိပဲ အလကားနေရင်း တွတ်ပီနဲ့မိသားစုကို အလိုလိုမျက်မုန်းကျိုးပြီး တစ်ဖက်သတ် လိုက်ကိုက်နေသူ စုန်းပြူးတွေကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့။ တို့ကတော့ ပြိုင်မရလို့ J အမြုံစိတ်ကနေ မခံစားနိုင်အောင်ပွင့်ထွက်လာလို့လိုက်ကိုက်၊ လိုက်ဖဲ့ကြသူတွေမို့ ခွေးလေးခုန်လို့ဖုံမထ၊အပင်မြင့်လေ လေတိုက်လေ၊မြွေမှန်ရင် တွင်းဝင်ဖြောင့်တယ်ဘဲ သဘောထားပါတယ် 🤔”
တွတ်ပီဆုံးပါးခဲ့ချိန်မှ ယနေ့ထိ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဂီတလောကမောင်နှမများ၊ fan များ၊ ပရိသတ်များ၊ တပည့်တပန်းများအစရှိသော ငွေကြေး၊ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား၊ အစားအသောက် အသုံးအဆောင်များ မေတ္တာဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြသူ မိတ်ဆွေစစ်အပေါင်း So thanks ပါရှင်.💕
တွတ်ပီလေးလဲ သူ့မိသားစုအတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပီတိဖြစ်နေမှာပါ။ အားလုံး…ကိုယ်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အပင် ကိုယ်ရိတ်သိမ်းကြရမှာ မလွဲဧကန်ပါ.🥰” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ ရေမွန်ကတော့ လူမရှိတော့တာတောင် မိသားစုအတွက် အားလုံးကမေတ္တာပေးခြင်းခံရအောင်ကို လေးစားခံရတဲ့ အနုပညာရှင်စစ်စစ်တစ်ယောက်ပါပဲ။